Turkey oo gaadhsiisay gargaar cuno ah magaalada Taciz ee Yemen bisha Ramadaan - Horn Future
Turkey oo gaadhsiisay gargaar cuno ah magaalada Taciz ee Yemen bisha Ramadaan
Taciz-Ururka samafal ka ah ee (Diyanet Foundation) ee Turkish ka ah ayaa gaadhsiiyey magaalada Taciz ee dalka Yemen 500 oo joonyadiid oo cunta ah maanta, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee SABA rasmiga ah ee dalka Yemen.
Urur samafal oo gudaha ah ayaa loo xilsaaray qaybinta gargaarkan kaas oo loo qaybiyay dadka saboolka ah ku nool magaaladan.
Guddoomiyaha ururkan Cabdul-kariim Shacbaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku qanacsan gaargaarka Turkey ee lasoo gaadhsiiyay dadka ay hayso baahida aadka u ba’an ee aadka u taagta daran.
Dalka Yemen oo ah mid kamid ah 20 wadan ee dunida ugu saboolsan ayaa waxa uu ku jiraa xaalad dagaal oo sokeeye tan iyo 2014,kadib markii argagixisada maleeshiyada shiicada Xuuthiyiinta oo isbaahaysi ka dhaxeeyo kaligii-taliyihii hore ee Yemen ay xoog ku qabsadeen caasimada Sanca iyo meelo kale oo dalka ah.
Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay in ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay iska horimaadkan ilaa imika,halka qaar badan oo Yemeni ah aynan awoodin inay helaan badeecadaha asaasiga ah oo ay ku jirto cuntadu.
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay bishii April ayaa waxa ay ku dhawaaqday in 10 daqiiqa ba uu ku dhinto 1 ilmo ah dalka Yemen isku celcelis ahaan,taas oo sababaha tooska ah ay yihiin dagaalada socda iyo hoos u dhaca ku yimiday gargaarka joogtada ah.
« Koob caano ah xilliga suxuurta waxa uu kaaga filan yahay inaad gaajooto	» Muslims protest closure of religious schools in Myanmar